Semalt: Veloma, Bots and Spiders!
Ny tombony ho an'ny tompon'ny tranonkala iray dia ny tatitra Google Analytics momba ny fifamoivoizana anaty tranokala. Na izany aza, indraindray dia mety ady tsy miato eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Ny olona sasany dia tsy mahatsikaritra fa ny sasany amin'ireo data momba ny fifamoivoizana ao amin'ny tatitra Google Analytics dia avy amin'ny robots. Ny botsa sy ny sponjy anaty aterineto dia ao ambadik'ireo tatitra momba ny angon-drakitra ao GA. Azon'izy ireo atao ny mitarika ny fampahalalam-baovao, izay mety hanimba ny fahasalaman'ny fampielezan-kevitra sy ny fanapahan-kevitra manaraka.
Ross Barber, Semalt Mpitarika Success Manager, mieritreritra fa tsy tokony hanahy ny tompony ny vohikala satria misy fomba iray ahafantarana sy manaisotra ny fifamoivoizan'ny spider sy bots. Midika izany fa ny vaovao nomen'ny Google Analytics dia azo antoka kokoa kokoa aorian'ny fampiharana ireo asa ireo.
Tsy misy fomba azo atao mba hisorohana ny tranonkala spam tsy hahatratra vohikala iray. Na izany aza, misy fomba iray ahafahan'ireo mpampiasa misintona ny spam sy ny fitaterana finday avy amin'ny tatitra. Ny ampahany betsaka amin'ireny bota ireny dia mety ho mora ampiasaina amin'ireny fomba ireny. Taorian'ny fanatanterahana fahombiazana, afaka mampitombo ny lanjany sy ny fahamendrehany amin'ny isan'ireo fitsidihana an-tsoratra maro hafa.
Ny fampiasana vaovao avy amin'ny tatitra maimaim-poana bot dia mahatonga azy ho azo itokisana kokoa. Ankoatra izany, dia mamela ny tompony hanamarina ny sehatra mitsidika. Miharihary ny tendrony sy ny lavadrano ary mazava kokoa ao anatin'ireo grafite novolavolaina.
Ahoana no hanafoanana ny botsikilovana Search Engine amin'ny Google Analytics?
Azo atao ankehitriny ny manasitrana ny angona momba ny fifamoivoizana amin'ny tranonkala iray, mba hahitana hoe iza amin'izy ireo no avy amin'ny asa ataon'ny olombelona ary avy amin'ny spam sy ny fikarohana bots. Ny hery hanaovana izany dia ao anatin'ny fepetra hanaisotra ireo fitsapana rehetra avy amin'ny robots sy ny spiders. Ity dia mari-pamantarana ao amin'ny sehatry ny Admin View ao GA.
Ny dingana manaraka mba hanafoanana ireo rehetra fanta-daza sy ireo jiolahy
Mametraha fomba fijery "test" ao amin'ny Google Analytics
Izany dia ahafahan'ny mpampiasa hanova ny fiovana tiany raha mihazona ny fahamarinan'ny tahirin-tsoratra voalohany ao amin'ny fomba fijerin'ny masera izy ireo. Izy io koa dia miasa ho loharano fampitahana mba hahafahan'ilay tompony mamantatra ny fiovana mitranga. Amin'izao vokatra mahafa-po izao, dia esory izao ny botso avy amin'ny fomba fijery.
Mankanesa any amin'ny sehatry ny Admin ao amin'ny fitaovana Google Analytics, fidio ny votoatin'ny fijery ary jereo ny safidy mba hanafoanana ny fitsapana rehetra amin'ny robots sy ny spiders. Rehefa tapitra izany dia tsy ho afaka amin'ny varotra fikarohana sy spam ny fifamoivoizana, izay mahatonga azy io ho mora kokoa sy mazava kokoa amin'ny tatitra momba ny fifamoivoizana.
Mamorà fanamarihana ao amin'ny grafan'ny GA mba hahalalanao fa misy ny fifamoivoizana aorian'ilay fanesorana ny fifamoivoizana.
Mety mahatsikaritra ny fitohanan'ny fifamoivoizana izay miankina amin'ny habetsahan'ny fifamoivoizan'ny bots. Ny fomba fijery sy ny fomba fijerin'ny masera dia hanampy amin'ny famaritana ny toerana mahatonga ny fifamoivoizana amin'ny fanaovana tatitra azo antoka kokoa Source .